बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन सक्दैन ? भन्दै प्रधानन्याधिशले यस्तो भने, हेर्नुहोस माघ ८ गतेका मुख्य समाचारहरु – Complete Nepali News Portal
बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन सक्दैन ? भन्दै प्रधानन्याधिशले यस्तो भने, हेर्नुहोस माघ ८ गतेका मुख्य समाचारहरु
उनले नेपालको संविधानको धारा ७६ को व्याख्या त्यसरी गर्न किन मिल्दैन भनेर बहसकर्तालाई प्रश्न गरिरहेका छन् । बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग पनि यही विषयमा प्रधानन्यायाधीश राणाको सवालजवाफ भयो ।
प्रधानन्यायाधीशले लगातार उठाएको प्रश्न भन्दै ज्ञवालीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने आधार र कारण दिन खोजे । उनले सरकार बन्ने सम्भावना हुँदासम्म संसद विघटन हुन नसक्ने भन्दै धारा ७६ (१) र धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नै नपाउने बताए । हेर्नुहोस माघ ८ गतेका मुख्य समाचारहरु :